सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध शसक्त रुपमा प्रतिवाद गछौंः महर - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध शसक्त रुपमा प्रतिवाद गछौंः महर
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको सत्तारुढ दल निकट युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने भएका छन् । नेविसंघले संसदको विशेषाधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने षडयन्त्रको पर्दाफास भएको भन्दै शसक्त रुपमा विरोध गर्ने बताएका छ । यसै विषयम नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरसँग नेपाली हेडलाइन्सले गरेको कुराकानीः–
सर्वोच्चको फैसलाप्रति नेविसंघको किन आपत्ति ?
नेपालको संविधान, बहुलवादमा आधारित राजनीतिक दल र संसदीय व्यवस्था क्रियाशील रहेको यथार्थतालाई बिर्सिएर सर्वोच्चको आदेशले व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार माथि ठाडो आक्रमण गरेको छ । अध्याँरो कोठाबाट संसदीय व्यवस्थालाई धरापमा पार्न तानाबाना बुन्नेहरुको षडयन्त्रको पर्दाफास गर्नको लागि विरोधमा उत्रने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले गरेको आदेशले त न्यायापालिको स्वतन्त्रता जोगियो भन्नछ नि ?
संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रहार गरी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको लोकतान्त्रिक पद्दतीको आत्मालाई ध्वस्त गर्ने आदेश स्वीकार्य छैन् । न्यायमूर्तिहरुबाट दिउँसै सूर्यास्त भएजस्तै गरी नेपाली जनतालाई अन्धकारमा धकेल्ने काम भयो । व्यक्तिगत रिसईवीकै मनसायले निर्णय गर्नु, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका विरुद्ध गरिने घेराबन्दीमा सामेल हुनु सम्मानित संस्थाको मर्यादामा आँच पुग्ने प्रकारका गैर न्यायिक क्षेत्रका चरित्रहरुले जस्तो व्यवहार गर्नु दुःखद र हास्यास्पद विषय हो । न्यायपालिकाले यो फैसलामा गम्भीर भुल गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश विवेकसंगत ढंगले नै आएको होइन र ?
सर्वोच्च अदालतको आदेश सन्काहा, देशलाई मुठभेड तर्फ लैजाने र लोकतन्त्र मास्ने प्रवृत्तिले फैसला आएको छ । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
संसदमाथि सर्वोच्चले हस्तक्षप गर्ने अवस्था त सत्तारुढ दलले नै सृजना गरेको भन्ने आरोप छ नि ?
संविधानमा नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । संसदको निर्णयप्रति सर्वोच्चले प्रश्न उठाउने व्यवस्था संविधानमा छैन् । संसदको विशेषअधिकारमाथि सर्वोच्चको हस्तक्षप किन ? निर्वाचनको वातावरण विथोल्न सर्वोच्च अदातले गलत कदम चाल्यो ।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएकै दिन प्रधानन्यायाशीशलाई पुनः सर्वोच्च फर्किन सर्वोच्चले गरेको फैसला संयोग हो कि योजनाबद्ध ?
यो सुनियोजित र योजनाबद्ध रुपमा आएको फैसला हो । लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने ठूलो षडयन्त्र हो । हामी यो कदमको शसक्त रुपमा प्रतिवाद गछौं ।
अब न्यायपालिका र संसदबीच देखिएको विवादको समाधान कसरी होला ?
सर्वोच्च अदातले गरेको फैसला सच्याउनु पर्छ । सर्वोच्चको विरुद्धमा दर्ता भएको रिटमाथि सर्वोच्चले नै फैसला गर्ने भनेको के हो ? अब सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यो मात्र एक विकल्प हो । गलत फैसला गर्दा स्वतन्त्र न्यापालिकामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ न्यायलयले दिनु हुँदैन ।
सर्वोच्चको फैसला त निकै भावुक भएर आएको छ नि ?
सर्वोच्चमा न्याय दिन बसेका न्यायाधीशहरु भावनामा बहकिएर फैसला गर्ने होइन । कानुन र संविधान अुनसार चल्ने हो । प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च फर्किनु भन्ने फैसलामा कही कतै पनि संविधानमा टेकिएको छैन् । यो फैसला नेपालको भलो नचिताउने देशमा अस्थिरता सृजना गर्ने विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलबाट आएको स्पष्ट छ ।
एमालेले त सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेको छ नि ?
यो एमालेको क्षणिक आत्मसन्तुष्टि मात्र हो । एमाले अहिले रमिते बनेको छ । उखान टुक्काले मात्र हुँदैन । संसदको अधिकार हनन गर्दा पनि एमाले रमिता हेरेर बसेको छ । एमालेको यो खुसी धेरै दिन टिक्न सक्दैन ।
Previousचुनावको मुखमै उपेन्द्र यादवलाई हटाइयो
Nextप्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता